Semalt Inotsanangura Zvinhu Zvipi Mufananidzo Wakanaka Unopisa
Pane nguva apo mufananidzo wakakodzera mazwi ane chiuru, asi zvino mifananidzo inokosha mazana mashoma anofarira, tweets, zvigunwe uye zvikamu. Kupfuura izvi, mapikicha akaiswa, akagoverwa, anoshandiswa zvakare, uye akagadzirirwa kubudirira kwebhizimisi. Vanhu kazhinji vanowedzera zvifananidzo pasina mvumo uye vanova nechinangwa chekuwedzera maratiro avo pasi rese. Mifananidzo yekuchera ndeimwe yezvinyorwa zvisingakanganwiki mazuva ano, asi kuva neruzivo pasi pechikwama chako chekushandisa kuchakupa zvakasiyana siyana. Zvakakosha kusarudza chakanaka chechifananidzo chekudzivirira chinogona kubatsira kukura bhizinesi rako uye kuvandudza kushanda kwewebsite. Pano takakurukura zvimwe zviitiko mufananidzo wakawanda unofanirwa kuva nawo:
Point-and-Click Agent Zvisikwa:
Chifananidzo chinyorwa chinobatsira kutsvaga mifananidzo yeGoogle neBing. Uyewo, zvinogona nyore kugadzira zvigadzirwa zvekugadzirisa uye kuita kuti ruzivo rwako rwekutsvaga ruve rwakashamisa. Uyezve, mufananidzo wezvinyorwa hazvidi kuti iwe uve nepurogiramu kana unyanzvi hwekunyora.
Kutarisa Kuonekwa Kwekugadzira:
Nechifananidzo chinyararire, unogona kubvisa zvakanyatsogadziriswa uye unotarisira nhamba huru yemapeji ewebhu nyore nyore.Uyewo, inobatsira kuderedza kunatsika kwekugadziriswa kwezvinodiwa uye kunokutora mifananidzo yakakwirira mukati memamiriro emaminitsi.
Image scraper inogona kubvisa ruzivo kubva kunopfuura 90% nzvimbo pasina unyanzvi hwekunyora coding. Somuenzaniso, kubva paJacScript-based dynamic sites uye maAJAX-based web pages.
Inonyora maitiro ekushandura:
Zvinyorwa zvisinganzwisisiki uye zvinyorwa zvemashoko hazviregi maitiro evashandisi. Asi mufananidzo unonyora unogona kutora maitiro evashandi kune imwe nzvimbo uye inokubatsira kuti uende kuburikidza nemapeji ewebhu.
Pane zvishoma web scraping uye zvigadzirwa zvemigodhi izvo zvine kambani yekudzidza mitambo. Mufananidzo wacho unotora iyi teknolojia uye unobvuma nyore nyore mifananidzo yako pamwe chete nemagwaro avo. Iyo inoderedza kushandiswa kwemari inopfuura 70% uye inoita kuti iwe unoda data kubva pamifananidzo yakananga.
Image scraper inoita kuti zvive nyore kwauri kuti usvike pahutaneti uye tarisa nhamba yakawanda yemasayiti. Uyezve, hauna hanya chero zvikwangwani zvakananga kuti uwane zvakachengetedzwa zvakachengetwa kubva pawebsite. Pane kudaro, unogona kuwana uye kubudisa webhusaiti yose kusanganisira zvinyorwa zvayo uye mifananidzo ine mufananidzo wezvinyorwa, pasina chero ruzivo rwekupinda kwemashoko.
Chigadzirwa ichi chinogona kukuvhura mavhidhiyo nemavhidhiyo kwauri asiwo inochengetedza nguva yako uye inoita mabasa ayo zviri nyore. Muchidimbu, unogona kuva nechokwadi chokuti uchawana zvifananidzo zvepamusoro uye uwane data yakarurama kubva pamapeji akawanda ewebhu sezvaunoda.
Nechifananidzo chinyararire, unogona kupora webhuti, zvinyorwa zvemashoko, uye magwaro kubva kune dzakawanda nzvimbo. Ichazobvisa zvinyorwa pamwe chete nemifananidzo yavo uye vanyorazve mazita avo.
Kana iwe uri mukana, iwe unogona kuwana mifananidzo isina chikwangwani paGoogle, Bing, Yahoo kana dzimwe nhepfenyuro dzepaIndaneti. Chinhu chakakosha zvikuru ndechokuti iwe unokwanisa kuparadzanisa mifananidzo yaunoda pasina kuisa kune unhu. Zvakanyanya kuoma kuwana dheasetti dzinoenderana nezvese zvatinoda. Ndinofara, chimiro chinonyadzisa chinoita kuti basa rako rive nyore uye ndiyo yakasarudzwa yebhizimisi uye marongerwo makuru. Kana iwe uchiremekedza mitemo yekodzero, iwe uchawana zvakanakisisa kunze kwechifananidzo chekugadzira chigadzi uye kuunza mitsara yakawanda pamatare Source .